Miditra vanim-potoana vaovao ny fifandraisana India-Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2018 5:08 GMT
Tany am-piandohan'ity volana ity, nanaisotra ny sazy maherin'ny 30 taona amin'ny varotra nokleary amin'i India ny governemanta amerikana. Nanasonia volavolan-dalàna manome alalana ny fanampian'ny Amerikana ny fandaharan'asa angovo nokleary sivily ao India ny filoha Amerikana Bush ary ho setrin'izany dia mamela ny fitaovany nokleary arahan'ny Fikambana iraisam-pirenena momba ny angovo atomika maso i India.
Riding the Elephant mihevitra fa miaraka amin'ity fifanarahana ity, dia niditra vanim-potoana vaovao ny fifandraisana amerikana-India, kihon-dalana vaovao. Marina ve izany? Azo antoka fa maro amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra no mihevitra izany ary nisy adihevitra mafana marobe tao India sy Etazonia momba ilay fifanarahana, nefa tena mahavariana ny antony tsy dia hisian'ny adihevitra be eo amin'ireo bilaogera Indiana momba ity lohahevitra lehibe ity.
Jayashree Bajoria ao amin'ny Filankevitry ny Fifandraisana ivelany mamelabelatra ny tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny fifanarahana nokleary Amerikana-India (fantatra amin'ny anarana hoe fifanarahana 123) izay heveriny fa kihon-dalana amin'ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy India.
DeepitA ao amin'ny Desicritics nanoratra hoe, “Ity (fifanarahana nokleary) ity dia anisan'ireo fifanarahana mafana sy iadian-kevitra be tato ho ato.” Nasongadiny ny fanoherana natrehin'ny firenena roa tonta tamin'ny fidirana tamin'ny fifanarahana ary nanamarika izy hoe:
“Tsy maintsy niatrika fanoherana tao anatiny ihany koa i Etazonia, na tao amin'ny Fitondràna, na ivelan'ny fiarahamonina stratejika, misalasala ny vahoaka hankatoa fiavahana amin'ny (Fifanekena tsy hanaparitaka Nokleary). Noheverina fa manome zo ho an'i India mba hampiasa ny hareny oranioma hanosehana ny fandaharan'asa ara-pitaovam-piadiana miaramila izany, ary nanome marika diso ho an'ny hafa, tahaka an'i Iran sy Pakistana koa izany. “
Ireto misy fanamarihana vitsivitsy avy amin'ny fomba fijery amerikana momba ny fifanarahana. Mahaliana fa samy nankatoa ny fifanarahana ireo kandidà ho filoham-pirenena Barack Obama sy John McCain, hoy i Siddharth Varadarajan nanoratra tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy.
Shashi Tharoor, izay mpikambana ofisialy ao amin'ny Firenena Mikambana, nilaza izao tao amin'ny lahatsorany ‘Nahoana i India no Tia an'i Bush‘: